(Dhageyso):-Odayaal ka baxsaday ‘ciidamo uu usoo diray’ Axmed Madoobe oo ka cararay Kismaayo – hareerley News
(Dhageyso):-Odayaal ka baxsaday ‘ciidamo uu usoo diray’ Axmed Madoobe oo ka cararay Kismaayo
Waxaa isi soo taraya cabashooyinka ka imaanaya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ee laga tirsanayo Madaxweynaha waqti xileedkiisu sii dhamaanayo Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe).
Iyadoo lagu howlanyahay dhismaha maamul cusub oo ay yeelato Jubbaland, ayaa waxaa Kismaayo ka jirta caburin lagu hayo wax garadka, siyaasiyiinta iyo dhamaan Bulshada reer Jubbaland, kuwaas oo si toos ah looga tirsanayo Madaxweyne Axmed Madoobe.
Nabadoon magaciisa aan kusoo koobnay Cabdi sababo amni dartood oo kamid Nabadoonada reer Jubbaland ee ku nool magaalada Kismaayo ayaa Radio Kulmiye u sheegay in ciidamo uu usoo diray Axmed Madoobe ay usoo dhaceen Gurigiisa iyagoo asaga raadinaya, balse waxa uu sheegay Nabadoonku in xiligaas uu ka maqnaay guriga, isagoo sheegay in Ilmihiisa lagu handaday iney sheegaan meesha uu jiro.
Sidoo kale Nabadoonka ayaa sheegay inuusan kaligiis dhibkaas qabin, balse labaacsanayo dhamaan waxgaradka ku nool magaalada Kismaayo, waxuuna dowladda federaalka ka dalbaday inay wax ka qabato oo aysan indhaha ka fiirsan xaalada aday oo sida uu sheegay ku heysata Kismaayo.
Magaalada Kismaayo ayaa lagu balansanyahay in dabayaaqada bishaan lagu qabto doorashada maamulka Jubbaland, hayeeshee ilaa hadda ma muuqato saansaan muujineysa in bishaan doorasho ka dhacdo Kismaayo.
Al Shabaab Oo weeraro dhuumaaleysi ah ku soo qaadey dhowr Furimood oo ay Ciidamadu Deganaayeen Ee Gobolka Shabeelaha hoose.
Iska hor imaadyadaan dagaal ayaa xalay waxaa uu siyaabo kala duwan uga dhacay deegaano iyo degmooyin ka tirsan Gobolka Shabeellaha Hoose,kaas oo u dhaxeeyay Ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo Ururka Al-Shabaab. Deegaannada ay dagaaladu ka dhaceen ayaa waxaa ka mid ah degmooyinka Awdheegle,Afgooye, Qoryooleey iyo deegaanka Bariire ee Gobolka Shabeellaha hoose,waxaana la sheegay in dagaalka uu […]
Coronavirus Oo kadeed nololeed oo aad uxun Galiyay qoysaska danyarta ah.
Tan iyo markii uu soo if-baxay cudurka faafa ee Safmarka ah ee COVID19 soona gaaray Soomaaliya ayaa waxaa gabi ahaanba noloshooda God weyn oo mugdi ah galay qoysaska danyarta ah ee ku nool Kaamamka ku yaala Muqdisho iyo nawaaxigeeda. Qoyaskan ayaa noloshooda intabadan ku tiirsanayd wax xoogaaga ah ee ay ka helaan qoysaska kale ee […]
Dowlada Soomaliland oo War ka soo saartay lixdii nin ee ay toogatay shalay
(Hargeysa ): Dowlada Somaliland Ee uu hogaamiyo Madaxweyne Muuse Biixi ayaa war ka soo saartay dilkii ay saaka Ciidamadeedu ku fuliyeen Lix Nin oo maxaabiis ahaa. Xeer ilaalinta guud ee Somaliland ayaa qoraal ay soo saartay waxay ku sheegtay sababaha ka dambeeyay dilka Lixdaasi maxbuus iyo magacyadooda. Qoraalka xeer ilaalinta ayaa sidoo kale waxa lagu […]
C/C Shakuur oo DF ka dalbaday in baaritaan hufan lagu sameeyo weerarkii Xarunta Gobolka Banaadir